Posted by blackroze at Friday, April 19, 2013
မနေ့ ကရန်ကုန်မှာမိုးရွာတာပေါ့ ဆေးကြောမိုးလေးထင်ပါ့ မစင်နိုင်ပါဖူးကွယ်
မိုးညချမ်း on 19 April 2013 at 20:35 said...
“မိုးည”ဟာ သိပ်ကို လွမ်းစရာကောင်းလွန်တာကိုး မမရဲ့ ... အပြစ်မဖြစ်ပါဘူးလေ ... အခါအခွင့်သင့်ရင်တော့ အမိမြေကို ပြန်လာခဲ့နော် ... ဆုံကြမယ် ... :)
Goldfish Lay on 19 April 2013 at 21:41 said...
Nice article. I miss YGN after reading your article.
run to tuition in the rain. to the book store.. everything is left in the past already..
ညိုလေးနေ on 24 April 2013 at 08:52 said...
မချစ်လို့ ထားခဲ့ကြတာမှ မဟုတ်ဘဲ
တစ်နေ့တော့ ပြန်နိုင်ကြမှာပါ :)
San Htun on 30 April 2013 at 08:04 said...
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်..ဒီနေ့တနေ့ လုံး မိုးရွာနေတာ..ရန်ကုန်ကို လွမ်းသွားတယ်...
နွေတေးရှင် (မင်းဧရာ) on 1 May 2013 at 16:05 said...
ပြန်စုံပြန်ကြုံကြဦးမှာပါ အဲဒီလိုမိုးရွာနေတဲ့ အထဲမှာ
ရေနွေးပူပူလေးမှုတ်သောက် တဖြောက်ဖြောက်နဲ့ မိုးရေကျသံတွေကို နားထောင်
တော်ပြီအေ အကိုတောင် လွမ်းလာပြီ။
မြတ်ပန်းနွယ် (Myat Pan Nwe) on 19 May 2013 at 15:33 said...
အတိတ်ကို ပြန်ပြောင်းအောက်မေ့ပြီး လွမ်းဆွေးတမ်းတတယ်ဆိုတာ နူးညံ့တဲ့ နှလုံးသားရှိသူတိုင်းမှာ ဖြစ်တတ်တာပါ ပစ်ပစ်ရေ။ :)
မြတ်မှာလည်း သတိရစရာအတိတ်တွေ၊ မမေ့နိုင်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ၊ ပြီးတော့ များလှတဲ့ အမှတ်တရတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေလို့ပေါ့။
မြသွေးနီ on 30 May 2013 at 18:47 said...
မိုးတွေ ဒီမှာလဲ ရွာနေပြီ...
မိုးရွာရင် တွေးလို့ ဆွေးလို့ ကောင်းတာ အမှန်ပါဘဲ..
စောင်ခြုံထဲကွေးပြီး ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ မိုးပေါက်တွေ အိမ်ခေါင်မိုးတိုးထိသံ နားထောင်ရတာ တကယ့်ဇိမ်ပဲနော်..။